Ihe 8 kacha mma ahịhịa na ngwa mgbake faịlụ maka gam akporo | Gam akporosis
Top 8 Mkpofu & Njikwa Iweghachite Ngwa maka gam akporo
Kwa ụbọchị, anyị na-ehichapụ ọtụtụ ihe sitere na ekwentị gam akporo anyị, yana ihe anyị na-ehichapụ nke kachasị niile bụ onyonyo na foto. Ọ bụ na ọ bụghị gị ka ihichapụrụ otu ma ọ bụ karịa nke masịrị gị, dị ka foto ndị ahụ ị sere n'abalị ahụ pụrụ iche ma ọ bụ ndị enyi ahụ ị na-ahụbeghị ogologo oge? Ọfọn, maka nke a E nwere ọtụtụ ahịhịa na faịlụ mgbake ngwa ọdịnala na anyị ga-akwado oge a.
Ngwa ahịhịa na ngwa mgbake faịlụ ị ga - ahụ na nchịkọta a bụ otu n’ime 8 kacha mma dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play. Na ha ị ga-enwe ike ijikwa ma weghachite foto na onyonyo, mana ọ bụghị naanị nke ahụ; ụfọdụ ga-enyekwa gị ohere iweghachite faịlụ dịka audios, akwụkwọ, na vidiyo.
N'ime ndepụta anyị gosipụtara n'okpuru, ị ga-ahụ Top 8 Mkpofu na faịlụ Iweghachite Ngwa maka gam akporo, dị ka anyị kwuru nke ọma. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ha niile nwere onwe ha na ndị kachasị ewu ewu, nke nwere ezigbo akara na ọtụtụ nbudata na-akwado ọrụ ya. N'ezie, ụfọdụ nwere ike iwepụta atụmatụ ndị ọzọ dị oke ọnụ ma dị elu nke enwere ike ịnweta naanị ma ọ bụrụ na akwụ ụgwọ dị n'ime.
1 Naghachi foto ehichapụ
2 Dumpster Recycle Bin
3 Naghachi foto ehichapụ si Mobile: Iweghachite data
4 Foto Iweghachite
5 Foto ntinye ngwa, mgbake
6 Nnyocha nyocha Super - Disk Deep Digger
7 Naghachi foto ehichapụ
8 Iweghachite vidiyo
Iji malite nchịkọta a na ụkwụ aka nri, anyị nwere Naghachi foto ehichapụ, ngwa nke ahụ na-enye gị ohere ịnweta faịlụ ehichapụ n'ụzọ dị mfe, foto na vidiyo maka mgbake ọzọ.
Naanị ịkwesịrị inye ya ikikere dị mkpa maka ngwa a iji nweta ebe nchekwa dị n'ime nke ama gị na kaadi microSD iji chọọ faịlụ, foto na vidiyo nke ihichapụrụ na mberede. Na nke ahụ, ịnwere ike ịnweta ma weghachite ha ngwa ngwa, na-enweghị nsogbu ọ bụla. Chere ka o mee nyocha nyocha ma choo ndi nile ehichapuru na mbu (Nke a nwere ike iwe oge, dabere na nha faịlụ ndị ehichapụ na ọnụ ọgụgụ faịlụ).
Ọ dị mfe iji. Mgbe nyocha ahụ gwụchara, a ga-egosipụta ọtụtụ folda nwere faịlụ ndị ehichapụ. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahọrọ ndị ịchọrọ iweghachi ma ndị a ga-apụta na ọnọdụ ndị a ga-egosi na ngwa ahụ. Dị ihe oyiyi na ụdị foto akwadoro maka mgbake bụ ndị a na-ahụkarị ma jiri, jpg, jpeg na png.
Dumpster Recycle Bin, otu n'ime ngwa ndị bara uru ị nwere ike ịnwe na ekwentị gam akporo gị taa, aka, mana ọ bụghị ad-n'efu.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ ahụ na-ehichapụ foto, onyonyo na ụdị faịlụ ndị ọzọ dị ka vidiyo, a ngwa ga-eje ozi dị ka a lifesaver na ihe karịrị otu oge, n'ihi na ọ na-azọpụta ihe niile ihichapụ site na ndudue wee weghachite ya ngwa ngwa na ngwa ngwa, na-enweghị mgbatị ọzọ. Ọ na-echekwa ụdị nsụgharị nke ngwa ọdịnala, nke bụ ihe na-atọ ụtọ, ọkachasị ma ụdị ọhụrụ nke otu anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta igwe ojii, ngwa a na-enye ya na ọnụ ala dị ala. N'ebe ahụ ị nwere ike ịchekwa ihe niile ịchọrọ nke ọma n'enweghị mgbasa ozi, ị ga-amachi. Na mgbakwunye, a na-enweta ngwa ahụ n'asụsụ 14, gụnyere, n'ezie, Spanish na Bekee.
Naghachi foto ehichapụ si Mobile: Iweghachite data
O meela karịa otu onye n'ime anyị na, ka anyị na-anwa ihicha ebe nchekwa dị n'ime ekwentị anyị ma hichapụ faịlụ, onyonyo, vidiyo na ọdịyo anyị na-achọghịzi, a na-ehichapụ ihe karịrị otu ihe na ndudue. Ọ bụrụ na anyị nwere ihu ọma, anyị na-aghọta ozugbo, wee mezie ihe a bụ na e mepụtara ngwa a, iji weghachite ihe ndị ahụ niile anyị achọghị ihichapụ ma ọ bụ, n'ọnọdụ ndị ọzọ, anyị na-ehichapụ mana anyị chọrọ ịgbake.
Faịlụ dị ka akwụkwọ, ihe oyiyi, videos na audios nwere ike natara na ngwá ọrụ a ngwa ngwa na-enweghị ọtụtụ nsogbu. Ọ dị ezigbo irèThe akụkụ kasị mma bụ na ị na-adịghị mkpa ka gị gam akporo ama na-esite, ihe ụfọdụ ngwa ọdịnala nke ụdị na-eme.
Ọrụ ọzọ nke ngwa a nwere bụ na na-enye gị ohere ilele faịlụ ndị ehichapụ wee hichapụ ha kpamkpam, iji nyere ohere ịhapụ ohere nke ohere nchekwa dị n'ime nke mobile, nke nwere ike ịbelata njedebe.
Ngwaọrụ a na-enyekwa ọrụ nchekwa igwe ojii. Nwere ike ịmepụta nkwado ndabere na mpaghara site na ya nke na-enye gị ohere ịchekwa ma zọpụta faịlụ gị kachasị mkpa, dịka foto, vidiyo na ndị ọzọ. Ihe ọzọ nke ngwa ọrụ a na-enye bụ mgbake nke foto na vidiyo site na WhatsApp, ọrụ bara ezigbo uru ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka ngwa izi ozi ngwa ngwa kachasị ewu ewu n'ụwa niile.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a nnọọ ezi ahịhịa na faịlụ mgbake ngwa na a elu nke arụmọrụ, nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma, e nweghị obi abụọ. Mmetụta ya karịrị 92%, nke mere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ faịlụ ọ bụla dị ka oyiyi, foto na vidiyo gbapụrụ na nyocha ya dị ike.
Nwere ike ihuchalu onyonyo na foto nke ngwa a na-akawanye, ka i wee ghara ihie ụzọ na onyogho ndị ahụ ị na-achọghị iweghachite na, na ntụle, na ndị ịchọrọ ịghachite. Nwere ike ịchekwa ndị agbakekwara n'ime ebe nchekwa nke ama ma ọ bụ na ebe nchekwa nke mpụga nke ama (ọ bụrụ na enwere otu). Ọzọkwa, ọ na-akwado ọtụtụ ụdị faịlụ dị ka JPG, JPEG, GIF, PNG, MP4, 3GP, TIFF, BMP, na TIF.
N'aka nke ọzọ, ọ nwere ihe karịrị nde 5, nbudata 4-kpakpando na Storelọ Ahịa Play, yana ọtụtụ nkwupụta na ọkwa dị mma nke tozuru ya dị ka otu n'ime ngwa kachasị mma na otu ya. Ya mere egbula oge ịnwale ya iji hụ otu o si arụ ọrụ.
Developer: Iweghachite foto, weghachite ehichapụ Image, 사진 복구
Foto ntinye ngwa, mgbake
Ihe ọtụtụ ụdị ụdị a enweghị ike ịme bụ naghachi faịlụ ehichapụ na kaadị ebe nchekwa nke ekwentị. Ọfọn, nke a dabara n'ime ike gị, mana kwa, dịka ị nwere ike ịtụ anya, ya mere nloghachi nke faịlụ site na ebe nchekwa dị n'ime ekwentị.
The ihichapụ faịlụ nyocha nke ngwa a bụ nnọọ irè na-egosi gị, ka ọnụ na idegharị usoro, ihe niile ị nwere ike naghachi gị na kaadị ebe nchekwa gị (ọ dịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na ted ya) na esịtidem ebe nchekwa nke ekwentị mkpanaaka gị na ngwa ngwa na mfe . Ọ na-enye ụdị nyocha abụọ: dị mfe ma dị omimi. N'ụzọ doro anya, nke ikpeazụ bụ ihe kachasị arụ ọrụ maka ịnweta faịlụ ehichapụ na mbụ.
Ọ na-enyekwa akụkụ dị mfe nke na-egosi ihe omuma banyere ama dị ka larịị batrị, ebe nchekwa dị n’ime, ebe nchekwa adịghị, ozi gbasara iji ebe nchekwa ekwentị mkpanaka na aha ihe atụ nke ekwentị ahụ.
Ngwa Iweghachite foto, ehichapụla vidiyo
Developer: Obi ụtọ free
Nnyocha nyocha Super - Disk Deep Digger
Nke a bụ ihe ọzọ magburu onwe ahịhịa nwere ike na faịlụ mgbake ngwa na-eche banyere niile ọcha na i nwee ike ihichapụ ụma ma ọ bụ site na ndudue na ị chọrọ iji naghachi ee ma ọ bụ ee enweghị isi nsogbu. Super ianomi Recovery anamde ihe ike ịgwụcha agwụcha i scanomi na-achọta ihe fọrọ nke nta niile faịlụ dị ka foto, oyiyi na vidiyo na ị na mbụ ehichapụ, mfe, ngwa ngwa na nanị.
Otú ọ dị, ọ bụghị naanị na nke ahụ; ọ dịkwa njikere obibi ọzọ data ọnwụ ọnọdụ gụnyere ekwentị mmelite, usoro okuku na ndị ọzọ.
Na mkpokọta, mweghachi faịlụ dị oke oke ọsọ, mana ọsọ ọsọ ya nwere ike emetụta nha faịlụ ahụ, ọ bara uru iburu n'uche. N'otu ụzọ, ọ bụ a pụrụ ịdabere na nnọọ vasatail ngwa, nakwa dị ka ịbụ otu nke kasị mma ihu.
N'ikpeazụ, ọ bụ otu n'ime ngwa ndị nwere akara kacha mma na Playlọ Ahịa Play niile, yana kpakpando 4.8 na ọtụtụ narị puku nbudata.
Weghachite - nnapụta vidiyo foto
Iji nọgide na-agbakwunye ngwa mgbake faịlụ na ndepụta a, ọ na-abịa iji naghachi Foto ehichapụ, ngwa ọrụ na - enye gị ohere iweghachi foto na onyonyo na - enweghị nsogbu na n’ụzọ dị mfe.
Ọ bụrụ na i jirilarị iche iche egweri ihe ntanetị na ngwa mgbake faịlụ na ha arụghị ọrụ dịka ị tụrụ anya ya, nke a nwere ike izute atụmanya gị, ebe ọ nwere ike ịnweta ihe niile foto ehichapụ site na ndudue ma ọ bụ ụma n'oge gara aga.
Na mgbakwunye, o nwere ihe karịrị nde 10 nbudata, akara ngosi 4.0 dị ezigbo mma na ọ bụ otu n'ime ụdị ụdị ya, yana a arọ nke na-adịghị ọbụna iru 3 MB na gam akporo Play Store. Ọ dị oke irè na ọtụtụ okwu ọ na-enweta na-akwado ya.
Iji mechie mkpokọta a na ụkwụ aka nri, anyị na-ewetara gị ngwa mgbake vidiyo a, nke ị nwere ike inye ndụ ọhụụ na vidiyo ndị ahụ na ịnweghịzi, ma ọ bụ n'ihi na ị na-ehichapụ ha na mberede ma ọ bụ kpochapụ ha.
Site na arụmọrụ nke 92%, nyocha nke ngwa a ga - achọta ihe niile vidiyo ịhichapụrụ na mbụ. Ma oburu na ihu oma diri gi, ikwesiri inwe 100% otutu oge. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ iweghachi na weghachite vidiyo, nwalee ngwa ọrụ a, nke bụ n'efu ma ọ chọghị ịnweta mgbọrọgwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Top 8 Mkpofu & Njikwa Iweghachite Ngwa maka gam akporo
Kedu ihe bụ na otu esi esi arụ ọrụ Uber?
Sọpụrụ Band 6, nyocha, njirimara na ọnụahịa